Achịcha na mịrị - otu uzommeputa
Họrọ uzommeputa di mfe maka achicha azu ulo? Anyị na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na ụdị dị iche iche nke achicha na mịrị amị, nyere n'okpuru. Obere oge na oge ochie nke ngwaahịa, ihe si na ya pụta bụ ihe na-atọ ụtọ na aromatic maka tii, nke ndị toro eto na ụmụaka ga-abụ ndị nzuzu.
Otu esi eme ka cupcake na-eme ka mpempe akwụkwọ na - emepụta ihe - dịka GOST si eme ya
ọka wheat - 255 g;
Ngwurugwu Chicken - 3 iberibe;
onye nkịtị uzo - 175 g;
galulu van - 20 g;
ntụ ntụ ntụ - otu ụzọ ntancha;
mkpụrụ vaịn gbara ọchịchịrị 175 g;
nnu nkume - obere nkochi;
sugar powdered maka ochicho mma.
Kwadebe ihe oriri na-emepụta kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka GOST dị nnọọ mfe. Ị nwere ike ozugbo gbanye oven, gbanwee ya na okpomọkụ nke ogo 170. Ugbu a, anyị na-ehicha mịrị ma jupụta na mmiri ọkụ maka nkeji ole na ole. Ngwurugwu nke ndi oru ugbo ocha bu ala na shuga, na-agbakwunyekwa vanilla shuga na nnu. Ugbu a, anyị jikọtara igwekota ahụ na nkwadebe nke mgwakota agwa, na-ewepụ otu àkwá ọkụkọ n'ime nchịkọta ihe ụtọ dị n'otu site na otu ma tie ya ọkụ. Ọzọ, anyị na-ehicha ma na-ejikọta ya na ntụ ọka ntụ ọka na obere akụkụ nke mgwakota agwa n'ime ya. Anyị na-agbakwụnye mịrị vaịn na mịrị amị, jiri nlezianya na-agwakọta ya na nchịkọta maka achicha ahụ, mgbe ahụ, anyị tinye ya n'ime ite mmanụ, tinye ya ma ziga ya na oven ahụ dị ọkụ.
Mgbe ihe dị ka iri asatọ nkeji nri, a ga-esi achicha. A ghaghị ahapụ ya ka ọ dị jụụ, mgbe nke a gasịrị, ọ ga-esiri ike ịkụze shuga, belata n'ime obere akụkụ ma na-eje ozi maka tii.
Nri achicha a na-eme n'ụlọ na mịrị amị na yogọt
ọka wit - 340 g;
Ngwurugwu Chicken - 2 PC.
onye oji uchu - 105 g;
ntụ ntụ ntụ - 10 g;
mkpụrụ vaịn gbara ọchịchịrị - 145 g;
Ndabere nke ule na nke a maka achicha ahụ ga-abụ kefir. Gwakọta ya na nsen a na-agba ya na sugar, tinye vanilla shuga na nnu, tinye mmanụ dị arọ ma mee ka ọ dị mma ọzọ. Ugbu a obere oge, anyị na-etinye aka na mgwakota agwa nke a na-eji ntụ ọka ntụ ọka eme achịcha ma nweta nsị nke ntụ ọka ntụ ọka niile. Na njedebe nke oge ịkwadebe ahụ, anyị na-agbakwunye obere mịrị amị, ma na-ebubata ntụ ọka ahụ iji kesaa tomato dị na ya.
Ọ na-anọgide na-edozi mgwakota agwa maka achicha ahụ n'ụdị mmanụ elekere ma na-eche maka mmiri nke ngwaahịa ahụ na oven. Iji mee nke a, buru ya ụzọ ruo ogo 175 ma setịpụ oge maka otu awa. Dabere n'ụdị ọdịdị ya na dayameta ya, ị nwere ike ịnweta ihe ma ọ bụ obere. A na-enyocha ịdị njikere na osisi akwara ahịhịa.
A kpochapụrụ cupcake ahụ nwere mma tutu ya ejiri sugar powdered.
Ntụziaka maka biscuits
Mgwakota agwa maka tubes na igwe ogwu
Ahịa site na marzipan - klas ndị isi
Salad mkpụrụ osisi na unere
Na-apụta na poppy osisi site na yist mgwakota agwa
Bisikiiki chocolate - uzommeputa
Pancake achicha na utoojoo ude
Esterhazy n'ụlọ - ndenye ọgwụ
Mgwakota agwa maka ogwu
Krupenik na obi cheese
Belevskaya pastilla - uzommeputa
Ejiri ihe dị ka achịcha na-eko achịcha na-eko achịcha - ihe kachasị mma maka nri ụtọ pastry
Kedu otu esi eme ka mmiri ara ehi na-eme mkpọtụ n'ụlọ?
Nwoke-Ọrịa Cancer, Nwaanyị-Sagittarius - Mmekọrịta
Kedu ka esi tufuo ebe obibi?
Ngwọrọgwu - ndepụta ọgwụ
Nyocha dị iche iche na cellulite
Ọkụ na-agbawa na ude mmiri
Basturma si na anụ ọkụkọ na ulo
Kedu ụdị nymphomaniac na otu esi amata ya?
Shia LaBeouf, Kristen Stewart na ndị ọzọ na mbido fim ahụ "American cutie"
Nke a mara mma oge ịse foto n'ụwa ga-akụtu gị n'ebe ahụ!
Karịa ikpo ụlọ dị na bat?
Ịzụ ahịa na akwụkwọ mposi
Kara Delevin ewepụtawo uwe nke Yves Saint Laurent
Ulo maka kichin
Lady Gaga na nzuzo lụrụ
Ọbara mgbali elu nke ogo 2
Hofitol - egosi maka ojiji